Ukuhanjiswa kweentyatyambo zeentyatyambo "iKasandra" eMoscow-odola iintyatyambo
Isipha seentyatyambo "Kasandra"
Ukuhanjiswa ~ 2h., yasimahla eMoscow
Ububanzi 40 cm
Ukuphakama 50 cm
Izimvo eziyi-48 malunga nomsebenzi weentyatyambo:
I-Rose Jumelia - iiPC ezingama-41. Iribhoni-1 pc.
Ngama-5250 Isipha seentyatyambo "Jumelia"
Isipha sehydrangeas enemibala emininzi (ii-7 iiPC) kwiphepha lokuyila.
Ngama-4550 Isipha seentyatyambo uAisha
Ibhasikithi ye-blue hydrangea 2 ii-pcs, i-blue Vanda orchid 8 ii-PC, i-lilac yenyanga i-carnation engama-20, i-pink freesia 9 ii-pcs, i-terry lilac eustoma i-8 ii-pcs, i-lilac matiolla i-6 ii-pcs, i-alstroemeria (i-pink kunye ne-lilac) ii-pcs eziyi-9, i-pink chrysanthemum 7 pcs , I-eucalyptus 1 ipakethe, ibhasikidi, iirebhoni.
Ngama-19730 Ingobozi eneentyatyambo "Paris"
minigerbera 15, ipistile, umhombiso
Ngama-3050 Gerbera bouquet "Umculo wehlobo"
Ibhokisi yeentyatyambo zeeroses ezinobunzima, kunye namajikijolo: amaqunube, iirasiki, amaqunube amnyama, kunye neelekese zaseFransi.
Ngama-8850 Ibhokisi eneentyatyambo, amaqunube kunye neelekese "Ifomula yothando"
Ibhokisi emile yentliziyo eyenziwe ngamajikijolo: amaqunube ama-500 gr., I-Raspberries 125 gr., AmaBlackberries 125 gr., Iiblueberries 125 gr., IiCurrants 125 gr.
Ngama-7450 Ibhokisi yentliziyo "Umxube weBerry"
Isipha seentyatyambo kuluhlu olumhlophe ukusuka: kwiinyibiba zase-oriental ii-pcs ezi-3, ii-hydrangea ezimhlophe ezi-3 ii-pcs, iRashiya emhlophe yenyuka ii-pcs ezi-6, i-lisianthus ezimhlophe ezi-4, ipakethe ye-salal 1, iphepha lobugcisa, iribhoni.
Ngama-8250 Isipha seentyatyambo "Isberg"
Isipha seeroses zokutshiza ezinemibala engama-51 ezineribhoni
Ngama-9650 Isipha seentyatyambo zamahlathi (iiroses ezingama-51)